AA Info Desk | VK
This is official VK Community Page of Arakan Army.
Our official website is arakan.army
We register this VK Community Page on 16th September,2018 .
ရခိုင်စာပီယဉ်ကျေးမှု နန့် သမိုင်းသုတေသီ ဆရာတော် ဒွါရာဝတီ-အသျှင်ကုသလ(ငွေသဇင်) ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခြင်းအပေါ် ဝမ်းနည်းကြောင်းနန့်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပီးပို့ခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မက်ချ်လ (၈) ရက်
website link: https://bit.ly/2OCl1nC
Linkပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္အသၽွင္ကုသလအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနန႔္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပီးပို႔ျခင္း bit.ly https://bit.ly/2OCl1nC
ညီနောင်မဟာမိတ် (၃) ဖွဲ့၏ တစ်ဖက်သတ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းအား ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်
website link: https://bit.ly/3aZsiGG
ယခုထုတ်ပြန်ချက်သည် ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(ULA)/ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)၏ ထုတ်ပြန်ချက် မဟုတ်ပါကြောင်း ပြည်သူလူထုအား လေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
website link: https://bit.ly/2NgBT2Z
Linkယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ULA/AA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္ bit.ly https://bit.ly/2NgBT2Z
5 Feb at 4:48 am
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်၏ နှစ် (၆၀) ပြည့် တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ PSLF/TNLA ,MNTJP/ MNDAA နှင့် ULA/AA တို့ထံမှပေးပို့အပ်သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်
ႏွစ္( ၆၀) ျပည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ PSLF/TNLA ,MNTJP/ MNDAA ႏွင့္ ULA/AA တို႔ထံမွေပးပို႔အပ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ
“Letter of Felicitation from The United League of Arakan (ULA) on the 72nd Anniversary of Karen Revolution Day”
(၇၂) နှစ်မြောက် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ULA) မှ ပေးပို့အပ်သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ
website link: https://bit.ly/36u39RJ
Link(၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအခမ္းအနားသို႔(ULA)မွေပးပို႔အပ္ေသာဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ bit.ly https://bit.ly/36u39RJ
12 Jan at 5:15 am
(၅၈) နှစ်မြောက် တအာင်းအမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြသော MNTJP/MNDAA နှင့် ULA/AA တို့မှ ပေးပို့အပ်သော သဝဏ်လွှာ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်
Clarification regarding the safe release of the three NLD members
from Taungup Township See more
The United League of Arakan/Arakan Army took three NLD members from Taungup Township in Arakan, U Min Aung, Daw Ni Ni May Myint, and Daw Chit Chit Chaw on 14 October 2020, as required by the military and political imperatives of the Arakanese revolution.
Today at 2:35 pm, an Arakan Army Transfer Team successfully handed over the three Taungup NLD members toaMyanmar Army Reception Team in Mee Kyaung Tat village, Myebon Township, Arakan.
The Arakanese peoples would like the NLD government, inaspirit of reciprocity, love, and generosity for peace, to release the Arakanese politicians and civilians who were arrested by the NLD government under various sections without committing any crime. These releases should also include members of the Arakan Army who are being detained under various circumstances as soon as feasible, in the same manner as the United League of Arakan/Arakan Army has just done.
DISCLAIMER: The English version isatranslation of the original in Burmese for information purposes only. In case ofadiscrepancy, the Burmese original will prevail.
website link: https://bit.ly/3hCdI9H
LinkClarification regarding the safe release of the three NLD members from Taungup Township bit.ly https://bit.ly/3hCdI9H
မြန်မာ့တပ်မတော်သားများထဲမှ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသူ (၃) ဦးအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်
website link: https://bit.ly/384UZ3CSee more
မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့သည် ရခိုင်ဒေသ၊ ပလက်ဝဒေသများ၌ နှစ်နှစ်ကျော် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ မိမိတို့ဖမ်းဆီးရမိသည့်သုံ့ပန်းများ နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဖမ်းဆီးထားခြင်းခံနေရသော မိမိတို့ အာရက္ခစစ်သည်တော်အချို့တို့အား "သုံ့ပန်းချင်းလဲလှယ်ရန်" ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များထုတ်၍ အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့သည် ရခိုင်ဒေသအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရသေးသောမြို့နယ်များ၌ ဆက်စပ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရန် ‘ဝ’ပြည်၊ ပန်ဆန်း၌ လူချင်းတွေ့၍လည်းကောင်း၊ အင်တာနက် Online ဖြင့်လည်းကောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပြောဆိုဆွေးနွေးပွဲများကြောင့် တိုးတက်မှုရလဒ်အနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်၊ နံနက် (၉) နာရီ (၃၀) မိနစ်တွင် မိမိတို့ဖမ်းဆီးရမိထားသော မြန်မာ့တပ်မတော်သား (၃) ဦးအား ပလက်ဝမြို့နယ်၊ အထက်ပီရွာအနီး၌ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံ၊ ခမရ (၈) မှ ဒုရင်းမှူး ၊ ဗိုလ်မှူးကျော်မင်းမြတ် ဦးဆောင်သော လက်ခံရေးအဖွဲ့လက်ထဲသို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် လွှဲပြောင်းရေးအဖွဲ့မှ ကောင်းမွန်စွာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသောသူ (၃) ဦးမှာ-
တို့ဖြစ်ကြပြီးတပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံ၊ မှော်ဘီအခြေစိုက် ခမရ (၃၁၃) တပ်ရင်းမှဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့၌ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ "ပကာဝရွာ"၏ အနောက်တောင်ဖက် (၃.၇) ကီလိုမီတာအကွာအဝေး (သို့မဟုတ်) ကာမချောင်း(ဒေသအခေါ် -ကာရမချောင်း) အနောက်ဖက်ရှိ တောင်တန်းပေါ်၌ (တနည်းအားဖြင့်) ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ပုန်းညက်ဝရွာအနီးဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲအတွင်း ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတိုက်ပွဲအတွင်း ခမရ (၃၁၃) မှ အရာရှိတစ်ဦးအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၃) ဦးအား ရက္ခိုင့်တပ်တော်မှ လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ယခင်ကာလများကလည်း အဆိုပါ (၁၃) ဦးထဲမှ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ကာ နဂိုကျန်းမာရေးအားနည်းသူနှစ်ဦးဖြစ်သော တပ်ကြပ်-ဦးမောင်ထွေး (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်- တ/၉၂၁၅၀၄)၊ အသက် (၄၉) နှစ် နှင့် တပ်ကြပ်-ဦးဇော်ဇော် (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်-တ/၂၆၀၀၆၂)၊ အသက် (၅၃ ) နှစ် တို့အား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့၌ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ကင်းတလင်းရွာ၌ ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ယနေ့တွင် ကျန်းမာရေးယိုယွင်းနေသောမြန်မာ့တပ်မတော်သား (၁၀) ဦးခန့်အား ပြန်လည် လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ စီစဉ်ရန်ရက်နည်းခြင်း တို့ကြောင့် (၃) ဦးကိုသာပြန်လည်လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အတူ တောင်ကုတ် NLD အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးမင်းအောင်၊ ဒေါ်နီနီမေမြင့် နှင့် ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောတို့ (၃) ဦးအား ULA/AA မှလိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးတင့် ဦးဆောင်သော လက်ခံရေးအဖွဲ့ထံသို့ကောင်းမွန်စွာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ရက္ခိုင့်တပ်တော်အနေဖြင့် အမှတ် (၁/၂၀၂၁) အားထုတ်ပြန်ပြီး မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း နှင့် ရခိုင်ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏သဘောထားကို ယနေ့ထုတ်ပြန်၍ အသိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း လက်ရှိရရှိထားသောတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဆက်လက်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအရွေ့နှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ရှုမြင်ယုံကြည်သည်။
Linkျမန္မာစစ္သားမ်ားထဲမွက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းသူ ၃ဦးအားျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ bit.ly https://bit.ly/384UZ3C
တောင်ကုတ် NLD အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် (၃) ရက်
website link: https://bit.ly/34XBRTe
Linkေတာင္ကုတ္ NLD အဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးအားျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ bit.ly https://bit.ly/34XBRTe